မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - Hello Sayarwon
Yu Wadi Lwin မှ ရေးသားသည်။ 14/11/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
၁။ အရေပြားရောဂါဌာန (၄၂)
လမ်း (၃၀)၊ ၇၇ လမ်းထောင့်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
ph- 02 21024
Strand Rd, Gaw Wein Jetty မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၃။ အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဌာနနှင့် ဆေးပေးခန်း
ph – 0221574
(၁၂) လမ်း၊ ၇၅-၇၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံရပ်ကွက်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ph – 36437, 36436
(၆၂) လမ်း၊ နန်းရှေ့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၅။ အနာကြီးရောဂါ ပပျောက်ရေးဌာန
ph – 02 21568
(၃၅) လမ်း၊ ၆၅-၆၆ လမ်းကြား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၆။ ငှက်ဖျားရောဂါ ပပျောက်ရေးဌာန
ph -02 20018
(၃၅) လမ်း၊ ၆၄-၆၅ လမ်းကြား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၇။University Red Cross Society Red Cross
၁။ မေတ္တာမြင့်မိုရ်လူမှု့တွဲလက်များ လူမှု့ကူညီရေးအသင်း
အောင်မင်္ဂလာအေးကျောင်းဧဇရပ် ။ မှန်တန်းရပ်ဧဇရပ်ကွက်၊အမရပူရ ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
ph – 02 40285, 02 40284
မြစ်ငယ်ထုံးဘိုလမ်း၊ တောတွင်းရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၆။ လင်းပွင့်သစ် ပညာရေးမြှင့်တင်မှု့အသင်း
မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမြို့နယ် ၊မဟာဂန္ဓါရုံကျောင်းတိုက်၊အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
မြစ်ငယ်ထုံးဘိုလမ်း၊ တောတွင်းရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ph.09444000459 , 092054762, 09444019932
သံလျက်မှော်အနောက်၊ခနွဲ့ကိုးရပ် အကွက် (၃၉၃)၊မိုဃ်းကောင်းကျောင်းအနီး၊မဟာအောင်မြေ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
ph.991012785 ၃၆×၃၇ လမ်း
ph.0947126243 ,09513342, 09402507181 ,0949231245
၇၈လမ်း/၄၂×၄၃လမ်းကြား/မိုးထားလမ်းသွယ် ချမ်း/မြောက်|မဟာအောင်မြေမြို့နယ်/မန္တလေးမြို့:၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
35×36 85 x86 ကြား၊မြတောင်တိုက်။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မဟာအောင်မြေ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၈၅လမ်း.၃၇×၃၈ကြား မန္တလေး မြို့၊မဟာအောင်မြေ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
(၄၁)(၈၀)(၈၁)ကြား ။ ပေါက်မြိုင်တိုက်၊ မဟာအောင်မြေ ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ph. 092039152 ,0933302001
ph.0933035407, 09797380385, 259001252
မန္တလေးတောင်ခြေ ခြင်္သေ့ကြီးနှစ်ကောင်အနီး၊အောင်မြေသာစံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ညောင်ကွဲ အကွက်( ၅) ၊အောင်မြေသာစံ အောင်မြေသာစံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၆။ ချမ်းသာ သုခအသင်း
Ph.09259700064 , 09259700065
သီရိမာလာအနောက် ချမ်းသာကြီး မြောက်တိုက် မန္တလေးမြို့၊အောင်မြေသာစံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ph. 092039152 ,0933312002
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ကြက်ခြေနီတပ်ခွဲ( ၁ ) ၊၆၃လမ်း၁၈/၁၉ကြားနန်းရှေ့၊အောင်မြေသာစံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၄/၁၅ကြား ။၈၁ လမ်း၊ဝါးရောင်းဝင်းဓမ္မာရုံ၊အောင်မြေသာစံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ph.0933048362, 092006423, 0943099660, 09402748872
၅၃လမ်းမြရည်နန္ဒါရပ်ကွက်lချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်lမန္တလေးမြို့၊ချမ်းမြသာစည် ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကံသာယာမြို့သစ်။ လေးမျက်နှာဘုရားတောင်ဘက်။ သာသနာ့ဝေပုလ္လကျောင်းအတွင်း၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃။ ချမ်းမြသီတာ လူမှုကူညီရေးအသင်း
မဟာပညိန္ဒါရာမ ကျောင်း ၅၄လမ်း ပြင်ဦးလွင် သံလမ်းအနီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်,မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
University Red Cross Society Red Cross
၁။SQUAD(ဗိုလ်ကလေးမျိုးဆက်သစ် လူငယ် များအဖွဲ့)
ph.94222878800 ၅ ရပ် ကွက် ၊ အောင် တော် မူဘုရားလမ်း။၊ဗိုလ်ကလေး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသင်း
၂။ အာရောဂျံ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝဘေးကူညီရေးအသင်း
၁၉လမ်း မိုင်ကုန်းကျေးရွာ ၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊အောင်ချမ်းသာရပ်၊မြို့ပတ်လမ်း။၊ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
Ph- 02 57470, 02 57014
မန္တလေး-ပုသိမ်ကြီးလမ်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ရန်ကင်းတောင်ခြေ ၊သီရိမင်္ဂလာသရက်တောကျောင်းတိုက် ၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၇၉လမ်း၂၇×၂၈လမ်းကြားတရုတ်တန်းဟေမာဇလရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြိုနယ်မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ph.02 66677 ,0933365579, 0933294155
၃။ ရွှေဘုံသာ လူမူကူညီရေးအသင်း
၄။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး Red Cross
၂၇×၂၈လမ်းရ၀ ၊တိုင်းကျန်းမာဦးစီဌာနရုံးအတွင်း၊ ချမ်အေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၁။ မနော်ဖြူ ရွှေနံ့သာ လူမူနာမှုကူညီရေးအသင်းနင့် သွေးလှူရှင်အသင်း
တံခွန်တိုင်ဈေးအနီး။ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
(င) စံပြရပ်ကွက်၊မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
(ဆ) ရပ်ကွက်၆၀ လမ်း၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၊မန္တလေး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
ph – 02 57470, 02 57014
မန္တလေး-ပုသိမ်ကြီးလမ်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
အုန်းဇုန်းအုပ်စု ဇရပ်ကွင်းကျေးရွာ၊သပိတ်ကျင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ph.0933146114 , 09793997969,09257276969
ပဒေသာမြို့သစ်။ ရပ်ကွက်ကြီး ( ၈ ) ရ ရပ်ကွက် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၂။University Red Cross Team (UT YCC )
University Of Technology (Yatanarpon Cyber )၊ပြင်ဦးလွင်မြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
ph – 35590, 35573
၁။Youths Over University
ph.09259201955, 09421737610, 09977271011
နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊့ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၂။ လေကြောင်းတက္ကသိုလ် ကြက်ခြေနီ အသင်း(MAEU-RCS)
မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်နှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်၊မိတ္ထီလာမြို့ ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ် သွေးလှူရှင်များအဖွဲ့
သာယာဝတီရပ်(နောက်ပိုင်း)ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားအနီး ၊ညောင်ဦးမြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၂။ မြင့်မြတ်သူ စေတနာ သွေးလှူရှင်နှင့် ၂၄ နာရီ အခမဲ့ လူနာတင်ယာဉ် အသင်း
ညောင်ဦးဈေး ဘုံ့ဇင် ကျောင်းဝန်းအတွင်း၊ ညောင်ဦးမြို့ ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၁။ သုခဒါနလူမှု့ ကူညီရေးအသင်း
ဘယ်လင်းကျေးရွာ၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
၄၃လမ်း၆၁\_၆ဝကြားသိပ္ပံလမ်း၊မဟာမြိုင်(2)၊မဟာမြိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မတ္တရာ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။
အင်းနှုတ်ခမ်း၊မြို့လယ်ရပ်။ မိုးကုတ်မြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပန်းမရွာသစ် ၊ ကျပ်ပြင်(အနောက်ပိုင်း)၊မိုးကုတ်မြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁။ ဂရုဏာရောင်ခြည် လူငယ်ပရဟိတအသင်း
မြစ်သားမြို့နယ်၊ရစ်ကန်ရွာ၊မြင်းခြံ၊မန္တလေး ကားလမ်းမအနီး၊မြစ်သားမြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ph.ဝ9402617553 ကျားတွင်းရွာ-၊မြစ်သားမြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁။ မုဒိတာ ပရဟိတအသင်း
လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
မြို့လှမြို့ အ နောက်ခြမ်း၊ရေတာရှည်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
အောင်သစ္စာကျောင်းတိုက် ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်း ရေတာရှည်မြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
09402733419 ,09402756336, 0933290534
ပေါက်အင်း၊ ပျော်ဘွယ်မြို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ဂဲကြီးကျေးရွာ၊ပျော်ဘွယ်မြို့ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
မဟာသမယလမ်း၊အောင်လံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ။